5 1 कच्चा 3/27/17 को लागी: घर छोड्नुहोस् - Wwe
5 1 कच्चा 3/27/17 को लागी: घर छोड्नुहोस्
गर्मी को कुना को आसपास मात्र छ। उनी त्यहाँ एम्मा, र दाना, र Paige, र एलिसिया संग छन्।
कच्चा बोर्ड भर एउटै समस्या छ जस्तो लाग्छ, त्यसैले मलाई लाग्छ कि उनीहरु त्यस क्षेत्रमा लगातार छन्। चुस्ने क्षेत्र। ठट्टा गरेको। क्रमबद्ध गर्नुहोस्। कच्चा महिला विभाजन यस बर्ष साशा बैंक र शार्लोट को बीच एक मुख्य घटना झगडा थियो कि धेरै धेरै विशेष थियो। बुकिंग एक सानो बेवकूफ भयो जब त्यहाँ एक गणितीय सूत्र धेरै चाँडै बाहिर राखिएको थियो: शार्लोट PPVs मा जीत, साशा कच्चा मा जीत। उनीहरु मूल रूप बाट बुकि rhyth ताल बाहिर सेट, र कुनै पनि आश्चर्य वा भावना को मेल निकासी को प्रयास मा, यो गर्न अडिग।
साशा र शार्लोट डोप पहलवान हुन्, जे होस्, तब जब उनीहरु इतिहास बनाइरहेका थिए जब उनीहरुलाई बाध्य पारिएको थियो, खेलहरु अझै तारकीय थिए। एक राम्रो खिंचाव को लागी कच्चा को बारे मा मात्र राम्रो कुरा थियो, त्यसैले पक्कै, यो के काम गर्दछ संग रहन को लागी अर्थ बनायो। तर यो अन्त्य हुनुपर्‍यो, जुन राम्रो छ। यदि तपाइँसँग अर्को के लागी योजना छ।
जाहिर छ, योजना ओह बकवास थियो, हामी शाब्दिक रूपमा अरु सबै को बारे मा बिर्सियौं। उम, के हामी केवल हामी सबैलाई एक म्याचमा फ्याँक्न सक्छौं जस्तै हामी हरेक बर्ष गर्छौं? हैन, स्म्याकडाउन पहिले नै त्यो गरीरहेको छ? र उनीहरुको यसमा धेरै महिलाहरु छन्? ठीक छ, ठीक छ हामी मात्र दुई महिलाहरु गर्न सक्दैनौं, प्रशंसकहरु भ्रमित हुनेछन्, यो Wrestlemania, मूर्ख हो। हामीसँग शार्लोट र साशा को अधिकांश बाहेक अरु को छ? होइन, एलिसिया फक्स शो को कम्तीमा महत्वपूर्ण कुश्ती भाग मा पहलवानहरु को नजिक कुश्ती मा व्यस्त छैन।
हैन, एम्मा अझै उनको फिर्ता प्रवेश को बिच मा छ। मलाई लाग्छ Paige त्यो हप्ता मेक्सिको मा छ। होईन, मैले ग्रीष्मकालीन राय पनि देखेको छैन। मलाई लाग्छ कि हामी मात्र साशाको साथी बेली को बेल्ट Wrestlemania सम्म फ्याँक्न सक्छौं, त्यसैले उनी त्यहाँ पूर्वनिर्धारित हुनु पर्छ। अँ हो! त्यहाँ Nia ​​Jax फेंक, र हामी एक घातक 4-तरीका हुन सक्छ! यो एक ट्रिपल खतरा भन्दा एक हो! गणित!
र त्यसपछि उन्माद अघि एक महिना जस्तै, दाना ब्रुक सबै हे साथी हो, म धेरै छिटो हरेक पक्ष मा धेरै राम्रो पाएको छु! मेरो लागी केहि छ? र तिनीहरू वास्तवमा होइन जस्तै थिए।
सेठ, यदि तपाइँ उन्माद सम्म उसलाई हिर्काउन को लागी पर्खिरहनुभएको छ, उहाँ मात्र तपाइँको घुँडा होइन एक घुँडा बनाउन जारी राख्नुहुन्छ।
किन सेठ मात्र त्यो क्र्याच संग टाउको भर मा यात्रा पर्खाल छैन?
वास्तविक को लागी, उनी Wrestlemania सम्म किन पर्खनु पर्छ? ऊ सुपर पागल हो, हैन? उहाँ रिंग मा हुनुहुन्छ एक सम्झौता मा हस्ताक्षर गर्न को लागी भन्छ कि यदि ऊ मर्छ वा केहि नजिक यो उसमा छ। त्यसोभए जाहिर छ कि उनी आफ्नो शारीरिक भलाई र क्यारियर लाई लाइन मा राख्न को लागी HHH लाई अलग गर्ने मौका पाउन इच्छुक छन्।
यदि उहाँ त्यो क्रोधित हुनुहुन्छ, कहिले र कहाँ सेठ घडी ट्रिपल एच फरक पर्दैन। यदि तपाइँ Wrestlemania सम्म पर्खनु हुन्छ, न केवल यात्राहरु को लागी उसको प्रवेश बाट केहि क्रिप्टोनाइट Exoskeleton हुनेछ, तर यदि सेठ विजयी भए पनि, H लाई उसको जीवनलाई नर्क बनाउन बाट के रोक्न? वा उसलाई गोली हान्न?
मलाई लाग्छ कि हामी सबै जान्दछौं उत्तर आयरल्याण्ड को कालो गुफाहरु मा छ। एक राजसी आकृति, तर एक गोली संग। एक वास्तविक राक्षस र लेगो को बिल्डर।
यो फिन हो। यो फिन हुनेछ।
जेफ wittek आँखा के भयो
म यो महसुस नगरी धेरै चर्को बोल्छु
कसरी एक सम्बन्ध मा सुरु गर्न को लागी
केटालाई कसरी मन पर्दैन
कसले जित्छ wwe कसरी निर्णय गर्दछ?
मेरो जीवनमा के प्रतिभा छ
कसरी बताउने यदि कसैले दिमाग खेल खेलिरहेको छ